सपथ खान शितलनिवास पुगेका शाह जिल्ल, अर्कैले उडाइदियो मन्त्री पद — Imandarmedia.com
सपथ खान शितलनिवास पुगेका शाह जिल्ल, अर्कैले उडाइदियो मन्त्री पद
काठमाडौ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद शाहको नाम अन्तिममा आएर काटिएको छ। पार्टी सिफारिस गरेर पठाएका शाहको अन्तिममा मन्त्रीहरुको लिष्टमा नाम नपरेपछि सबैजना चकित भएका छन्। जसपाले उनीसहित चारजना मन्त्रीको नाम चयन गरे प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको थियो।
उनलाई कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको थियो। शीर्ष नेताहरुको सो निर्णयलगत्तै उनलाई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बधाई दिन सुरु गरेका थिए। उनी आफू मन्त्री हुनेमा ढुक्क थिए। फोन र म्यासेजबाट बधाई तथा शुभकामना आइरहेको थियो।
शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको नामावली सार्वजनिक भयो। त्यसमा प्रमोद साहको ठाउँमा महेन्द्र राय यादवको नाम थियो। सुरुदेखि नै जसपामा कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले नेतृत्व गर्ने कि अर्का सदस्य महेन्द्र राय यादवले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरामा विवाद थियो।
शीर्ष नेताहरुको छलफलमा राजेन्द्र श्रेष्ठले नेतृत्व गरेर जाने भएपछि महेन्द्रराय यादव मन्त्री हुनेबाट ब्याक भएका थिए। बैठकले चारजनाको नामलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रीको सूचीमा प्रमोद साहको नाम परेन।
मन्त्रीको सूचीमा नाम नपरेपछि साहले भने, ‘मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ, पार्टीबाट मेरो नाममा सहमति भएको थियो तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट नामावली आउँदा मेरो नाम काटिएको छ यो कसरी भयो मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ।
महेन्द्रराय यादव र प्रमोद साह दुवैजना सर्लाहीका हुन्। दुवै जनाले महन्थ ठाकुरलाई छाडेर उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका थिए। महेन्द्र राय यादवले भने सुरुदेखि नै ठाकुरको साथ छाडेर यादवलाई साथ दिँदै आएका थिए।
तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण हुने वित्तिकै महेन्द्र राय यादव उपेन्द्र यादवको साथमा गएका थिए। पछिल्लो समय महन्थ ठाकुरले आफ्ना पक्षबाट तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा १० जना मन्त्री पठाउँदा प्रमोद साह लगायतका सांसदको नाम गएको थिएन। त्यसबाट साह असन्तुष्ट थिए।
त्यसपछि उनीसहित सातजना सांसदहरुले उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका थिए। आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा विवाद चलिरहँदा साहलगायतले उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका थिए। प्रमोद साहकै कारण उपेन्द्र यादवको पक्षले बहुमत प्राप्त गरेका थिए। उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिइएको थियो। तर अन्तिममा उनको नाम काटिएको छ।
नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एक्सनमा उत्रिएकी छन्। मन्त्रालयमा भएको ब्रिफिङ कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज गरेको सुन्नु नपरोस् भन्दै कर्मचाहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्। उनको यो निर्देशनले देशभरबाट वावाही पाएकी छन्।
यसैगरि, पदभार ग्रहणपछि मन्त्री झाँक्रीले सम्पूर्ण क्षमता लगाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै बजेट फिर्ता पठाउने अवस्था नआओस् भनेकी हुन्। भन्ने भन्दा धेरै सुन्ने, सुन्नेभन्दा धेरै गर्ने हो। के काम गर्न सकिन्छ गरौं’, कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री झाँक्रीले भनिन्।
सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट समर्पण गर्‍यो भन्ने सुन्नु नपरोस्। मन्त्रालयका अधिकारी र मातहतका विभाग तथा आयोजना प्रमुखहरूलाई आफ्नो काम र योजनाबारे लिखितमा ब्रिफिङ गर्न पनि मन्त्री झाँक्रीले निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्रालयमा बसेर कामको प्रगतिबारे ब्रिफिङ गर्नुभन्दा पनि काम भइरहेका कार्यालयमा नै गएर ब्रिफिङ लिने पनि उनले बताइन्। मन्त्रालयमा हुने ब्रिफिङमा मलाई बुँदागत रूपमा लिखितमा दिनुपर्छ। मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गर्नुभन्दा पनि काम भइरहेका कार्यालयहरूमा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्रालयबारे मन्त्रीलाई हुने ब्रिफिङ दसैं अगाडि नै सक्न पनि कर्मचारीहरुलाई झाँक्रीको निर्देशन छ। मातहतका प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो क्षमताले सकरात्मक परिणाम निकाल्नका लागि काम गर्नुपर्ने उनको निर्देशन थियो। यस्तै मन्त्रालयका योजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाइ थियो।
उनले आयोजनामा रहेका नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्न आफूले भूमिका खेल्ने पनि बताएकी छन्। सहरी विकासमा बाटो, खानेपानी र ढललाई एकै ठाउँमा ल्याएर लैजान खोजेमा अहिले जस्तो विकासको अवधारणा रही नै रहन्छ होला। उनले भनिन्, ‘सहर बस्ने मानिसले धाराबाट पानी खाने अवस्थामा आउने गरी काम गर्नुपर्छ।
यसका लागि स्वच्छ पानीसहितको ढल विकास, खानेपानी, बाटो एकीकृत हिसाबले गर्ने गरी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ। यसैगरि, नेपाली कांग्रेसका फेरी लफडा भएको छ। मन्त्री छनोटको विषयमा कांग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल गुटमा लफडा भएको हो। मन्त्रीको अत्यन्तै धेरै आकाँक्षी रहेकी नेतृ सुजाता कोइरालाले मन्त्री नपाएको भन्दै लफडा गरेकी हुन्।
उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको साथ छोडेको घोषणा गरेकी छिन्।मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकै दिन सुजाताले पौडेल र कोइरालाले कांग्रेस चलाउन नसक्ने बताइन्। रामचन्द्रजी र शशांकबाट यो पार्टी चल्न सक्दैन। उहाँहरूमा ईर्श्या, घमण्ड, अहंकार र स्वार्थभन्दा केही देखिएन। अब उहाँहरुलाई मेरो साथ रहदैन’, सुजाताले भनिन्।
आफूलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी नगराउने कुरा ३ महिना पहिले नै थाहा भएको भन्दै सुजाताले कांग्रेसभित्र धोकाको राजनीति गर्नेले पार्टी चलाउन नसक्ने बताइन्। रामचन्द्रजी कहिल्यै फस्टम्यान हुने मान्छे होइन। उहाँले कांग्रेसलाई सधैँ विभाजित गर्नुभएको छ।
शशांकले पनि महामन्त्रीमा पर्फमेन्स दिन सकेनन्। अब यी दुवैजनालाई मेरो सहयोग हुँदैन’, सुजाताले भनिन्। अब कसलाई साथ दिने त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले पार्टीभित्र सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताइन्। कसलाई साथ दिने छलफल गर्नै बाँकी छ । यत्ति हो रामचन्द्र र शशांकसंग अब म छैन’, उनले भनिन्।
यसैगरि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले गम्भीर रहस्य खोलेका छन्। हमालले आफू कसको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्नेबारे रहस्य नखोलेपनि आफू नेपाली कांग्रेस भएको स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे ।
उनले आफू २०२५ सालदेखि कांग्रेसमा लागेको बताएका छन्। म भर्खर मन्त्री बनेर आएको छु, मेरो विगतका क्रियाकलाप हेर्नुपर्छ। २०२५ सालमा नेपाली कांग्रेसमा लागेको हो। २०२७ सालमा बाँकेमा विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष भएको हो, बाँके, दाङ र सल्यानमा आन्दोलन गरेको हो,’ उनले भने।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको नाताबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले खुलेर कुनै जवाफ दिएनन्। पारिवारिक नाता त सबैको हुन्छ नि ! म निरन्तर रूपमा कांग्रेसमा लागेको मान्छे हो, २०५२ सालमा सभापति हुँदा बाँकेका ३ वटै क्षेत्र निर्वाचित गराएको हो,’ उनले भने ।
मन्त्री हमालले गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताए । ‘गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने कुरा संविधानमै उल्लेख छ’ उनले भने। कसको कोटाबाट मन्त्री बनेको, प्रधानन्यायाधीशसँगको सम्बन्ध लगायत विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले जवाफ दिएनन् ।
केहीदिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कुरा राख्ने भन्दै उनी बाहिरिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन्।